Isithwathwa. Yini, yakhiwa kanjani futhi iyini imiphumela | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Uma uhlala endaweni enobusika obubandayo, impela uvukile ekuseni futhi zonke izitshalo zimbozwe ungqimba oluncane lweqhwa elimhlophe. Lolu ungqimba, olubonakala lukhona nieve, ibizwa Isithwathwa. Kuyinto yokwakheka kwamakristalu amancane eqhwa akha izibalo zamakristalu. Bavame ukwakha ezungeze izimoto, emawindini, nasezitshalweni lapho amazinga okushisa ephansi kakhulu ebusuku. Ukuze iqabaka lakheke, akwanele ukuba nokushisa okuphansi kuphela, kepha kufanele kuhlangatshezwane nezinye izimo ukuze kwenzeke.
Ngabe ufuna ukwazi ukuthi yiziphi izidingo nokuthi iqhwa lakheka kanjani? Kulesi sihloko sizochaza konke ngokuningiliziwe kuwe.
1 Ukugcwaliswa komswakama womoya
2 Kwakheka kanjani isithwathwa
3 Izidingo zokwakhiwa kweqhwa
4 Imiphumela emibi
Ukugcwaliswa komswakama womoya
Umoya esiwuphefumulayo awuyona nje ingxube yamagesi lapho kutholakala khona umoya-mpilo ne-nitrogen. Kukhona futhi umswakama noma okube ngamanzi esimweni somhwamuko. Njengoba sazi, ukugcwala komoya kumswakama kuncike ekushiseni kwesisindo somoya nemvelo. Uma izinga lokushisa elingelincane, umoya usheshe ugcwale umswakama. Yilokhu okwenzekayo uma sifika emotweni ebusika kanti ngokuphefumula kwethu sidala ukuthi kubenenkungu emafasiteleni.
Okwenzekayo uma singena kulesi simo ukuthi umoya ongaphakathi emotweni uyabanda, ngakho-ke uma siqhubeka sikhipha umoya nomswakama, sizobe siwugcwalisa futhi uzogcina usudumbile. Ukususa inkungu emafasiteleni, kufanele sisebenzise ukufudumeza. Umoya oshisayo usekela umhwamuko wamanzi ngaphandle kokujiya.
Yize kungabonakala njengokuthize okuphikisana nayo yonke imiqondo, umoya ogwadule unomphunga wamanzi omningi kunomoya osendaweni yasentabeni eneqhwa. Kwenzekani-ke? Yebo, ubukhulu bomoya obunamazinga okushisa aphakeme buyakwazi ukubamba umhwamuko wamanzi amaningi ngaphandle kokubamba.. Lokhu kwaziwa njengephuzu lamazolo. futhi ikhombisa izinga lokushisa lapho umoya ugcwala khona umswakama bese uqala ukujiya. Kwenzeka okufanayo nangemfudu esiyikhipha ngobusuku obubandayo basebusika.
Kwakheka kanjani isithwathwa
Lapho sesazi iphuzu lokusuthisa lomoya kumswakama, singaqonda ukuthi iqhwa lakheka kanjani. Yebo, njengoba umoya esiwuphefumulayo uqukethe umswakama, uma izinga lokushisa liphansi kakhulu, umhwamuko wamanzi ngeke nje ujiye, uzophenduka isimo esiqinile. Ukuze iqhwa lakheke, kufanele kube nezinga lokushisa elingaphansi kwalelo lomoya osuthisayo.
Lapho kusihlwa, ilanga liyayeka ukunikeza ukushisa emvelweni futhi umoya uqala ukuphola ngokushesha. Umhlaba uphola ngokushesha okukhulu kunomoya. Uma kungekho moya, umoya upholile ungqimba. Umoya obanda kakhudlwana, uyaqina, ngakho wehlela ngaphezulu. Ngakolunye uhlangothi, umoya ofudumele uzohlala ezindaweni eziphakeme, ngoba awuminyene kakhulu.
Lapho umoya obandayo wehlela ngaphezulu, izinga lokushisa lizokwehla ngokuqhubekayo ngenxa yomphumela wamakhaza phakathi kwesisindo somoya nezwe elibandayo. Lokhu kuzokwenza izinga lokushisa liphansi kunendawo yokugcwalisa umswakama womoya, ngakho-ke umhwamuko wamanzi uhlangana namaconsi amanzi. Uma izinga lokushisa elizungezile lingaphansi kwamadigri ayi-0 futhi kungekho moya wokuqeda lokho kuzinza, i- amaconsi amanzi kubekwe ezindaweni ezifana namaqabunga ezitshalo, amawindi emoto, njll. Zizophenduka amakristalu eqhwa.
Yile ndlela iqhwa elenzeka ngayo ebusuku obubandayo basebusika.
Izidingo zokwakhiwa kweqhwa
Njengoba sibonile, sidinga ukuthi umoya ube ngaphansi kuka-zero degrees, ungabi nomoya nokuthi umoya ugcwale umswakama. Ezimweni zezulu lapho umoya womile, ngeke ubone isithwathwa sakha noma ngabe izinga lokushisa lingu -20 degrees noma ngaphansi. Iqiniso lokuthi amanzi aba yiqhwa kuma-zero degrees akulona iqiniso ngokuphelele. Sifundiswe kusuka ebuntwaneni ukuthi indawo eqandayo yamanzi ingu-zero degrees, kepha lokhu akunjalo neze.
Amanzi emvelo imvamisa anokungcola okufana nothuli, amachashazi omhlaba noma enye into esebenza njengengqamuzana lokuncipha kwe-hygroscopic. Lokhu kusho ukuthi lezi zinhlayiya zisebenza njenge-nucleus yokwakhiwa kwamaconsi amanzi noma, kulokhu, amakristalu e-ice. Ukube amanzi ebengahlanzekile ngokuphelele, ngaphandle kwencithakalo ye-condensation, kuzodingeka izinga lokushisa lama- -42 degrees ukuze amanzi aguquke kusuka ketshezi aye esimweni esiqinile.
Lesi futhi ngesinye sezizathu esenza ukuthi kwezinye izindawo ezinothuli olukhulu lomkhathi kube nezimvula ezinamandla nezingalindelekile. Lokhu kungenxa yokuthi kunokuhlushwa okuphezulu kwe-condensation nuclei eyakha i- amafu amaconsi amanzi akhiwa ngaphambi kwezulu.
Lezi zinhlayiyana ze-condensation zingatholakala futhi ezindaweni esishilo njengezimoto, ingilazi noma amanzi okuyiwona evapotranspires ngokusebenzisa ukushintshaniswa kwegesi kwezitshalo. Ubuso besitshalo bungaba nezinhlayiya zothuli, isihlabathi, njll. Lokho kusebenza njenge-condensation nucleus yokwakheka kwamakristalu e-ice.
I-Frost uqobo ayiyona ingozi kuya ngezindawo lapho ikhiqizwa khona. Uma sineqhwa ku-asphalt kungaholela engozini yomgwaqo ngenxa yokungaguquguquki kahle kwamasondo phansi kanye ne-skid engalindelekile. Ngokwesinye isandla, kunezitshalo eziningi zezitshalo ezingabekezeleli isithwathwa nesithwathwa esincane. Kulezi zinhlobo zezimo, izitshalo zingathinteka kakhulu.
Kuzo zonke ezinye izindawo, isithwathwa ngokuvamile asinikezi izinkinga. Imane ikhulise umuzwa wamakhaza.
Ngiyethemba lolu lwazi lusiza ukuthi ufunde kabanzi ngeqhwa.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Izimo zezulu » Isithwathwa